Vari Zvemukati Vatengesi Vakagadzirira Kukanganiswa? | Martech Zone
Mune chidzidzo chitsva chakatumirwa na Kapost kubva kuAberdeen Boka, kutsvagurudza kwakawana vashoma vashambadziri vanonzwa kuti vari kugadzira zvakakwana nekutevera zvirimo. Uye mukana unoshandiswa uri kubuda pakati pevatungamiriri vezvinyorwa uye vateveri vezviri mukati. Kapost inodaidza nguva yekushanduka uko kudiwa kwakakwira asi kuronga kwakanaka kuri kushomeka Zvemukati Chaos. Vakagadzira iyo infographic pazasi yekuisa yakakosha zvipingamupinyi (uye mabhenefiti) kumisikidza yakanyatso gadziridzwa zvemukati mashandiro maitiro.
Nesu tese tichigadzira zvirimo zvakawanda, zviri kunetsa kuti vashambadziri havaone sekuti vari kugadzira zvakakwana zvinobudirira, kuteedzera zvirimo zvinobudirira, uye kuteedzera zvinotungamira zvinogadzirwa kubva mune izvo zvirimo.
Tags: zvemukati mhirizhongaContent Marketingzvirimo kuitakugadzirwa kwemukatikapostmutungamiri wechizvarwakuteedzera mashandiro
Nov 1, 2013 pa3: 10AM
Ichi chinyorwa chikuru Douglas, hongu uri kutaura chokwadi! Vashambadzi chaizvo vari pasi pekumanikidzwa kuti vagadzire zvirimo zvikuru. Hwaro hwakakura hwemukati ndeyekuti inofanirwa kuve yehupenyu, yekutanga uye yekugadzira.